स्वर्ण पदक विजेता निर्देशको राजनीतिक छलाङ - hastalikhit.news
स्वर्ण पदक विजेता निर्देशको राजनीतिक छलाङ
काठमाण्डौँः राजनीति कसले गर्छ ? ‘ब्याकबेन्चरले’ ‘नेताको सन्तानले’ ‘व्यापारीको सन्तानले’ या केही यस्तै अरु ! आशा छैन राजनीतिमा । न त विश्वास छ राजनीति गर्नेमा । नेपाली राजनीतिप्रतिको आम धारणा राम्रो छैन । बहुदल प्राप्तिपछि दलहरु भ्रष्ट भए र राजनीति व्यापार भयो भनेर नागरिक निराश मात्र भएनन तत्कालिन राजाले समेत कदम लिए । जुन कदम गलत थियो । राजाको गलत कदमको विरुद्ध दलहरु उत्रिए तर जनताले सित्तिमिति विश्वास गरेनन । विस्तारै दलका युवा नेताहरु सडकमा आए । युवाहरुले आशा देखाए । नागरिक तयार भए दलहरुलाई विश्वास गर्न र विशाल जन आन्दोलन भयो । व्यवस्था परिवर्तन मात्र भएन दलहरुले गुमाएको विश्वास पनि फिर्ता पाए । कारण थियो आन्दोलनमा युवाहरुको नेतृत्व !
अहिले नागरिकहरु फेरि चरम निराशामा फसेका छन् । नयाँ संविधानले ल्याएको आशा तिब्र दलीयकरण र भ्रष्टाचारले जनता निराश छन् । देशको एक तिहाई जनशंख्या देश बाहिर श्रम बेच्दै छ । अलीकति सपना देखाएर कमरेड ओली सत्तामा आए । नेकपाको दुईतिहाई आयो तर निराशा झन बढ्यो । अहिले राजनीति निराशाको केन्द्र बनेको छ । तर केही युवाहरु छन र केही प्रयाश भएका छन् जसले फेरी यो निराशामा आशा छर्दैछन । अब ६३ साल भन्दा झन गाह्रो छ नीराशा चिर्न तर निरन्तर लागिरहे के असंभव ? युवाहरुले सफा मन र जोशीलो हात लिएर आए यो निराशा कसो नचिरीएला ? यस्तै धारणा लिएर राजनीतिको फरक शिरामा सकृय छन् निर्देश सिलवाल Nirdesh Silwal ।
सिलवालले राजनीतिशास्त्रतर्फ स्नातकोत्तर तहमा ३.८६ गे्रड ल्याएर स्वर्णपदक प्राप्त गरे । स्कुले तह लमजुङको भूपू सैनिक माविबाट २०६३ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका सिलुवाल स्कुलमा पढ्दाखेरि प्रथम भएनन् , तर दोस्रो या तेस्रो स्थान छुट्दैनथ्यो । उनले इन्टरमा साइन्स लिएर पढे पनि स्नातकतहमा स्वीडेनको माल्मो युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे अध्ययन गरे । स्नातकोत्तरतहमा भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रमा भर्ना भए ।
अहिले पार्ट टाइमरका रुपमा ‘लिटिल एन्जल कलेज अफ मेनेजमेन्ट’ र ‘नेसनल कलेज अफ ल’ मा राजनीतिशास्त्र पढाउँछन् । करिऔर मात्र हैन उनले राजनीतिक अभ्यास पनि शुरु गरिसके विवेकशिल पार्टीबाट । ०७४ मा लम्जुङबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार समेत बनेका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्दा दलगत विद्यार्थी सङ्गठनको विकल्पमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न अभियान चलाएका २९ वर्षीय सिलवाल त्रि.वि.सेमेस्टर विद्यार्थी समाजको संयोजक भएर नेतृत्व गरेका थिए । माल्मो विश्वविद्यालय स्विडेनवाट अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धमा स्नातक सिलवालले त्रि.वि.बाट राजनीतिशास्त्रमा सर्वोत्कृष्ट ग्रेड ल्याएर स्नातकोत्तर गरेका छन्। राजनीतिशास्त्रको अध्यापन गरिरहेका सिलवाल प्राज्ञिक अनुसन्धानमा समेत दख्खल राख्छन्। ‘ललित चन्द पदक’ र ‘वडाकाजी मरिचमान सिंह पदक’ पाउनु भएका सिलवाल पनि सरकारी सेवाभन्दा समाज परिवर्तन पेशा रोजेकोमा गौरव गर्दछन। सरकारी सेवाप्रति रुचि नभएकाले समाज परिवर्तनका लागि राजनीतिक गर्न थालेकोमा शन्तुष्ट छन् उनी ।
विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक अभियानको नेतृत्वकर्ता सिलवाल अब पनि सचेत युवाले राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने, मुलुक झन पछि पर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछन। लमजुङ्गमा जन्मेका हुर्केका सिलवाल ‘वैकल्पिक राजनीति’को खाका सहित सक्षम यूवा नेतृत्व दिन अघि सरेका छन् विवेकशील नेपाली दलको राजनीति मार्फत । अहिले विवेकशील नेपाली दलको केन्द्रिय सदस्य उनी छिटै दलको नेतृत्व तहमा आउने र दललाई उत्कृष्ट बनाउँदै दललाई र आफूलाई सँगसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराउन सकृय रहेका छन् ।
Tagged Nirdesh Silwal, निर्देश शिलवाल
विवेकशीलको गण्डकी प्रदेश कार्यालय उद्घाटन
जुर्मुराउँदै विवेकशील नेपालीः गण्डकी प्रदेश भेला सम्पन्न